यी महिला पाइलट, जसले गरिन् १० हजार जनासँग सहवास ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/यी महिला पाइलट, जसले गरिन् १० हजार जनासँग सहवास !
‘मेरी श्रीमतीको ट्रकको टायरमा हावा भर्नका लागि मलाई खुद्रा पैसा चाहिएको थियो,’ ५७ वर्षे ती व्यक्तिले भने । ‘पैसा साट्ने हिसाबले मैले १० डलर पर्ने लक्की सेभेनको टिकट किनेँ । टिकट बेच्ने कर्मचारीले मलाई गल्तीपूर्वक २० डलर पर्ने टिकट दिए,’ उनले भने । ‘ती कर्मचारीले टिकट सादिदिने बताए तर पछाडिबाट कसैले टिकट नसाट्न र आफैंसँग राख्न सुझाए । मलाई खुसी लागेको छ कि मैले उनको सल्लाह मानेँ ।’
चिट्ठाको परिणाम मंगलबार घोषणा गरिएको हो । जसमा यी व्यक्तिले दुई मिलियन डलर अर्थात् २४ करोडको नगद जिते । जितेको पैसाले के गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘म एउटा घर किन्छु र बाँकी रकम भविष्यका लागि जोगाएर राख्छु ।’